Saamaynta Windows AeroSnap ama Compi Grid ee Xfce | Laga soo bilaabo Linux
Dhawaan isticmaale ayaa i weydiiyay boostada haddii uu la socdo Xfce waxaan lahaan karnaa wax lamid ah saameynta hawada sare de Windows, ama Compiz Grid, kaas oo aan ku hagaajineyno daaqadaha shaashadda dhexdeeda adigoo si fudud ugu jiidaya cirifka shaashadda.
Waxaa soo baxday in Archlinux AUR waxaa jira balastar loogu talagalay xfwm taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan si sax ah u sameyno tan (waxayna ka shaqeysaa p% $ # hooyo) taas oo aan ku rakibi karno furitaanka konsole iyo gelinta:
Ugu dambeyntiina, markay dhammeyso isku-dubaridka wax walba, ayaa taas noo sheegi doonta xwfm4-fooranaya khilaafaadka leh xfwm, laakiin taasi nama danaynayso. Waxaan kuu sheegeynaa haddii aad rakibto iyo kadib xirista fadhiga oo aad dib u gasho, waxaan heleynaa natiijada soo socota:
Waa isku mid haddii aan u jiidanno dhanka midig, sida bidixda iyo nacasnimada cajiibka ah (Waxaan dareemayaa tusaalaha, waan faraxsanahay), sidoo kale kor iyo hoos ayey u qabataa 😀
Tifatir: Haddii saameyntu aysan magacaas lahayn, midkoodna Windows ama Compiz ha i ogeysiiyo ... 😛
Waan jeclahay Xfce <3
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Lagu taliyay » Windows AeroSnap ama saamaynta Grid ee Xfce
Sidaad dhahdo, sidoo kale waxaan rajeynayaa in tan markii ugu dambeysay ee 4.10, aan ku rakibey maxaa yeelay waxaan xiiseynayay muuqaalkaas daaqadaha waana raadiyay illaa aan ka helay xfce, haddii aad daaqadda kor u qaaddo ama aad hoos u dhigto waa isku mid laakiin si siman way fiicantahay. Waxa ka maqnaan lahaa (sidaan qabo) ayaa ah iyadoo daaqad loo jiidayo koone waxaa la gelinayaa shabag 2 × 2, maxaa yeelay waxa ilaa iyo hada la arki karo waa 2 × 1 ama 1 × 2 (waxay kuxirantahay haduu yahay mid jiifa ama taagan), ama ku samee hotkey.
Sikastaba, waa wax aad ufiican waxaanan kugula talinayaa dadka isticmaala xfce ee isticmaala in kabadan hal daaqad miiskiiba ama leh haha ​​balaaran iyo / ama baaxad weyn.
Iyo gnome? shabag in sida loo isticmaalo 😐
Ku jawaab ToRA
Mmm fikrad maleh. Waxaan u maleynayaa inaad u isticmaali laheyd Compiz taas.
Kaliya waa inaad rakibtaa CompizConfig iyo qaybta "Window manager", hubi sanduuqa 'Grid' oo ku wareeji isku darka muhiimka ah ee aad doorbideyso.
Haddii maamulayaashu u oggolaadaan waan ka tagayaa xidhiidhkan illaa maqaal blog ah oo ay ugu sharxayaan tallaabo tallaabo.
Wanaagsan !!! Aad baad u mahadsantahay Elav, hada wax ka maqan Xfce ma jiraan.
Weli waan faraxsanahay. Waxaan horeyba ugu qoray liiska Xfce si aan u arko haddii ay ku jiraan shaqadan qaab ahaan Xfce 4.10 😀
Waxay umuuqataa in qofkastoo xirmada ku hayaa AUR uusan mar dambe haysan waqti uu kuqabto
Ceeb In kasta oo taasi dhab ahaan aysan macno lahayn. Dalbashada balastarka waa inuu ahaadaa mid fudud 😀
Aad u fiican! nacalad ma lihi Arch mana ahan LMDE = S ... waxay umuuqataa inaan badalayo markaan awoodo ...
Haddii salaadayda ay maqlaan kuwa horumariya ee Xfce oo ay ku daraan nooca xiga, waa inaad waxyar sugtaa inaad ku haysato LMDE 😀
Waxaan rajeynayaa inay ku dhageystaan.
Tani aad u qabow hubaal waa muuqaal aad u faa'iido badan, laakiin nacalad ku beddel Arch for Opensuse mana faraxsani 🙁
Ha! Oo maxay taasi u tahay?
Ma aqaano nin, beryahan dambe waxaan rabay rabitaankaas inaan isku dayo wax kasta oo xitaa aan ka fikirayo inaan waqti ku qaato chakra, lama soo dejinayo haddii kalese waxaan hubaal ku noqon doonaa Arch.
Mawduuc noocee ah ayaad u isticmaashaa desktop-ka?
Isku darka Bluebird + Zukitwo oo aan sameeyay oo la yiraahdo ZukiBird 😀
Hagaag, ma xuma haddii aad wadaagto, maxaa yeelay ma arag mid kafiican xfce. By the way, ma waxaad isticmaashaa isha ubuntu mise sidaas ayaan qabaa?
Haa, waxaan isticmaalaa font Ubuntu .. Tan iyo markii nuqulkii ugu horreeyey soo baxay. 😀
Miyaad haysaa qoraal ku saabsan mawduucaaga? Waxaan sidoo kale ka helay mid aad u qabow!
Hadaad ula jeedo mawduuca XFCE, waad raadin kartaa halkan.
Hehe .. markaan daaqad u jiido dhinaca shaashadda, badanaa waxaan u sameeyaa si aan ugu wareejiyo desktop-ka xiga; tan wali ma ii shaqeyn doontaa markaan codsado snap-ka?
Jawaab Eddy Ernesto del Valle Pino
Arintaas ayaa looga hadlay liiska Xfce. Soo-saare ayaa ii sheegay isla wax la mid ah, in markii la isticmaalayo wax ka badan hal kormeer ay dhibaato noqon karto. Waxaan soo jeediyey in lagu daro ikhtiyaar ahaan, in la hawlgeliyo ama la joojiyo sida isticmaalaha ugu baahan yahay. Qof kale ayaa soo jeediyay in lagu samayn karo wakhti in milliseconds ah, taas oo ah, marka daaqadu u dhawaato cirifka, shaqadan lama dhaqaajin doono ilaa in muddo ah.Laakiin waxba maahan, wax walba waa laga wada hadlayaa hadda.
Waan haystaa oo waxaan u gudbin karaa daaqadaha kumbuyuutarrada kale, waa inaan in yar ku sii jiidayaa dhinaca uu yaal desktop-ka kale, ma garanayo sida ay u dhaqmi doonto u gudbinta kormeerayaasha kale.
Arrinta "tiling" ayaa mar horeba soo ifbaxday waqti hore markii ay codsadeen isticmaalayaasha qaarkood. Xaqiiqdii, Xfce wiki waxay umuuqataa astaamo lagu daro 4.10. Si kastaba ha noqotee, horumariyayaashu ma aysan awoodin inay la kulmaan taariikhaha la dejiyay, markaa waa suurtagal inay uga tagaan ilaa 4.12. Waan ogaan doonnaa (marka laga reebo haddii ay jiraan dib u dhacyo kale) bisha Maarso ee sannadkan.
Ku jawaab Cryotopo
Hagaag, haa, arinta horeyba waxay ugu socotaa liiska horumariyeyaasha. Aan aragno sida ay ku dhammaato. Mararka qaarkood waxaan dareemaa dareenka ah in barnaamijyada Xfce aysan jeclayn inay wax badan beddelaan ama aqbalaan isbeddelada cusub. Iyaga wax walba waxay umuuqdaan kuwo aan loo baahnayn.
Beddel waxa la yiraahdo beddel, iyagu ma jecla wax. Tusaale ahaan, taxane ah liistada boostada ee soo-saareyaasha, suurtagalnimada in tabs loogu daro Thunar ayaa laga wada hadlay jawaabtuna waxay ku dhowaad si wada jir ah u diidday Janis Pohlman iyo shirkadda, iyagoo ku andacoonaya dhibaatooyin xagga dayactirka ah.
Runtu waxay tahay mararka qaar ma aqaano waxa laga fikiro horumariyayaasha ... hada waa run oo waa run inay badalayaan qaab dhismeedka gudaha ee Xfce wax badan (xfconf, libxfceui4 oo badalaya libxfcegui4, GIO, iwm) iyagoo doonaya inay ku tiirsanaadaan inta ugu yar maktabada Gnome iyo GTK kaliya. Xaqiiqdii 4.8 shaqadii waa la qabtay "badh" waxayna isku dayayaan inay ku dhamaystiraan 4.10.
Iyo sida ay iyaguba yiraahdaan, waxaa jira kuwa aad u yar oo horumariya oo daryeelaya deegaanka, dad muhiim ah ayaa ka tagay, in yar ayaa lagu daray qaar kalena sida Pohlman aan kor ku soo sheegnay ayaa shaqooyin ka helay adduunka "dhabta ah" ee xaddidaya waqtiga ay ku bixin karaan.
Xitaa sidaas oo ay tahay, habdhaqankiisa ayaa sidoo kale aniga ii muuqda mid aan dhaqaaqi karin.
Waa run, waan ka qayb galay doodaas. Waxay ku adkeysanayaan inaysan dib u qorin Thunar, ama aysan ku darin tabeeda marmarsiiyo ahaan inay luminayso fududaanteeda. Waxaa laga yaabaa in sababta ay u leeyihiin wax yar oo horumariya ay taasi tahay uun, in aysan ii oggoleyn inaan waxyaabo cusub ku daro.
Waxyaabaha qosolka leh ayaa ah in Oliver Fourdan, abuuraha Xfce uusan ka qeybqaadan waxyaabahan. Waxay u egtahay in Janis Pohlman uu ahaa hogaamiyaha, yaa sameeya go'aamada ku saabsan waxa la xidhayo iyo waxa aan la xidhnayn ... Sidee la yaab leh maaha?
PS: Maaha in lagu khiyaaneeyo laakiin balooggaagu wuxuu ka mid yahay kuwa yar ee xiisaha u leh dunida Linux. Salaan (oo waliba aan marwalba hilmaamo inaan ku iraahdo hello) Jasiiradda Iberia.
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga, waxaad noo sasabaysaa runta.Waxaan rajaynayaa inaad halkan ku dareemayso wanaag, qoys ahaan.
Waad salaamantihiin meelkale oo kamid ah dunida 3aad hahaha ..
Qeybinta ugu wanaagsan Linux-qaybinta